Dhaamsa Waggaa Haaraa, 2017 Adda Bilisummaa Oromoo Irraa });
Dhaamsa Waggaa Haaraa, 2017 Adda Bilisummaa Oromoo Irraa
Kabajamaa Ummata Oromoo, mirgi kee sarbamuu irraa alagaan roorrifamuu irraa jireenya hadhaawaa gaggeessuuf dirqamte,
Miseensota ABO kaayyoo keessanitti cichuun QBO keessatti qooda lammummaa bahataa jirtan;
Waraana Bilisummaa Oromoo diina kuffisaa kufaa jirtu,
Qeerroo Bilisummaa Oromoo, diina dhala namaaf naasuu hin qabne irratti finciluun mirga ummata keessaniif falmaa irratti argamtan,
Akkasumas deggertootaa fi firoottan QBO
ABO Baga waggaa haaraa 2017 geessan jechuun maqaa GS-ABO fi miseensota ABO maraan dhaamsa gammachuu isiniif dhiheessa. Waggaan haaraa kunis waggaa ummatni Oromoo harqoota gabrummaa jalaa bahee bilisummaa isaa itti gonfatu, bara diinni ummatootaa itti jilbeenfachiisamee kabajamuun mirgi ummatootaa itti mirkaneeffamu akka tahu hawwina. Wayta wggaan haaraa seenu waggaa dabre keessa kan raawwatame, milkiilee argaman, gufuulee fi rakkoolee mudatan of booda deebi’uun kan ilaallu irra caalaa hojjatuuf ittiin of qopheessuufi. Bara 2016 keessa mooraan QBO maal akka fakkaatu, ummatni Oromoo haala akkamii keessa akka turee fi dabarse, haalli impaayera Itophiyaa fi diinaa maal akka fakkaata ture? gamaaggamatuun waggaa haaraa keessa kan hojjatamuu qabu irratti hammilee fi murannoon itti seenuutti dabalee gufuulee mul’atan jabinaan dura dhaabbatuu dhaan irra aanuuf gargaara.
Ummatni Oromoo jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif harqoota gabrummaa irratti fe’ameen miidhaan dorgomaa hin qabnee fi hacuccaan dhala namaaf hin malle irra gahaaera. Waggoota dheeraa bittaaa alagaa jala ture kana keessattis mootummootnii jijjiiramanillee, akeekaa fi galiin isaanii jijjiiramuu dhabuu irraa hacuuccaa fi saaminsi babal’atuu fi jabeeffamuu malee isaa isanii xiqqaatanii hin mul’atne. Maqootnii sirnaa hawwatoo moggaafatanis summii dammaan makame, waaroo akeeka qaban ittiin golgatan tahuu irra dabree ummatoota fayyaduu hin dandeenye. Kan bara bittaa Wayyaanee/IHADG ammoo ittuu hammatee ummata Oromoo diinatti moggaasee duula bifa gara garaa irratti geggeessuu irratti argama. Kana irraas ummatni Oromoo haala kanaan dura mul’atee hin beekne keessatti akka jireenya gadadoo keessatti kufu taasifameera.
Har’as taanaan ummata Ormoo biyya isaa irratti qee’ee isaa irraa humnaan buqqisuu dhaan lafa dhablee taasisuun akka mirgaatti fudhatamee bal’inaan gaggeeffamaa jira. Maqaa misoomaa fi guddina shaffisaa argamsiifna jedhuun qotee bulaan Oromoo lafa isaa irraa buqqaafamee ari’ama. Addatti ammoo magaalaalee Oromoo Finfinneetti marsanii jiranii fi itti dhihoo jiran keessa kanneen jiraatan, manni irratti diigamee, obruun saamamee ari’amaa jiran. Kana irraas, Oromoo lafa isaa irraa buqqaasuun kan badhaadhaa jiran alagoota maqaa investmentiin alaa dhufanii fi Wayyaanota aangoo humnaan dhuunfatani dha. Oromiyaan bakka Abbaan biyyaa itti hagabuu fi hiyyoomu alagaan ammoo keessatti duroomu taateetti.
Mootummaan Wayyaanee/IHADG murna hawaasa Oromoo keessaa addatti dargaggo Oromoo irratti xiyyeeffatuun maqaa ABO fi goolessummaan, ajjechaa fi hidhaan waggaa dabarsine keessa bal’inaan raawwatame gochaa gara jabinaa fi bineensummaa ti. Qaroo fi hubataa, beekaa fi dammaqaa keessaa filanii ajjeesuu fi hidhuun, tarkaanfii Wayyaanee ummata Oromoo qor-qalbii isaa cabsuun, hogganaa fi hayyuu dhabsiisuun bittaa isaa turfatuuf fudhataa jiru dha. Kanneen hawaasa biratti fudhatama qaban hidhaa fi doorsisaan jireenya dhorkatuunis tarkaanfii diinaa beekamaa taheera. Baratanii hojii dhorkatamuun ykn hojii gadi aanaa hojjatuuf dirqamuun hiree dargaggoo Oromoo taasifameera.
Gadadoon dorgomaa hin qabne kun hundi irra gahullee dargaggoon Ormoo ABO jalatti maqaa Qeerroon gurmaa’uun falmaan itti jiru kaayyoo ABO bakkaan gahuu irraa humni hanqisuu danda’u akka hin jirre mirkaneessa. Qeerroon Oromoo adda durummaa fi murannoon falmaa waggoota kudhanii oliif addatti ammoo waggoota lameen as aanan keessa adeemsiseen ummata isaatti abdii horeera. Hidhaa fi ajjeechaa, ari’insaa fi rakkoolee biroo irra gahaniif osoo hin jilbeenfanne, wal gurmeessuu dhaan diddaan agarsiisaa jiru kan diina muddamsuu keessa seensisaa jiruu fi bilisummaan ummata Oromoo kan hin hafne tahuu mirkaneesse dha. “Wayyaanee jalatti hin bullu!” jedhee ummata kakaasuu fi hiriirsuunn gochaa addunyaan raajjeffatee fi dinqisiifate kan raawwate Qeerroon Bilisummaa, waggaa haaraa seenaa jiru kana keessattis FXG-tti xumura gochuun seenaa boonsaa akka galmeessu shakkiin hin jiru. Fiixa bahiinsa akeeka kanaafis ABOn gama danda’ame hundaan kan cinaa jiru tahuu jala muree hubachiisuu fedha. Miseensotni dhaabaa hundi, deggertootnii fi ummatni Oromoo marti sochii ilmaan isaa itti jiran kana beekee waliin akka hiriiru ABOn hiree kanaan dabalataan yaadachiisa.
ABO fi WBO dhabamsiisuuf duulli waraanaa fi diplomaasii wal irraa hin citne waggoota dheeraaf irratti adeemsifamaa jira. Kan irratti duulamuufis Kaayyoon haqaa deggersa ummata Oromoo qabu kun akka hin milkoofne taasisuuf jecha. Haa tahu malee duula fuula hundaa keessaa fi alatti irratti gaggeeffamaa turee fi jiru ABOn injifatee jireenya isaa mirkaneeffatuu qofa osoo hin taanee caalaattuu jabaatee fi humnaa’ee qabsoo bilisummaa finiinsuu itti fufee akka jiru hubatamaa dha. Milkii kana argamsiisuu keessattis qoodni ummata keenyaa biyya keessaa fi alaa, akkasumas miseensotaa fi deggertootaa olaanaa waan taheef ABOn galata dhiheessaaf. Kana waliin itti fufiinsa qabsoo bilisummaa Oromoo iggiteessuu keessatti WBOn qooda mul’ataa gumaachuu ummata keenyaa fi diina jalaa dhokataa miti. Wayta ammaas WBOn magaalaa fi baadiyyaa bal’aa keessatti diinaa fi lukkeelee diinaa irratti tarkaanfii fudhtuu irratti argama. Kan dhabamu ABO mirga ummata Oromoof falmaa jiru osoo hin taane kanneen haqa ummatootaa irra ejjatuun saamisnaan deeggsanii fi mirga ummatootaa sarbuun ukkaamsuu hawwan akka tahe haalli Oromiyaa keessattii fi bakkoota gara garaa Empayera Itophiyaa keessatti waggaa dabre keessa mul’ataa turan shakkiin alatti dhugoomsan.
Waggaa dabre keessa ummatni keenya harqoota gabrummaa jalaa of baasuuf tarkaanfiin fudhataa ture kan qabsaawotaa fi firrootan qabsoo gammachiise, diina ummata Oromoo hamilee cabsee fi mataa gadi qabachiise dha. Hundaan olitti ammoo bilisummaan wareegamaan alatti hin dhuftu! jechuun wareega fedheefuu qophii tahuu isaa ifatti labsatuu dhaan qabsoo keessatti hirmaannaa isaa guddisuun qabsoo bilisummaa fuula dura tarkaanfachiisuu danda’eera. Firaa fi diina adda baafatee bilchinaan tarkaanfiin fudhataa tureen shira diinaa fashalseera. ABOn ummatni keenya waamicha ABO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoof owwaatuun muratnoo ol aanaa agarsiise kana ni dinqisiifata. Kabajaa qabaaf. Qabsoo bilisummaa wareegni qalii itti bahaa jiru kanas caalaatti finiinsuun bakkaan gahuuf kaayyoo keenya irratti cichinee daran dachaa dachaa haa warraaqnu jedha. Tarkaanfii diinni fudhatuun osoo hin rifanne waliin hiriiruun haa qabsoofnu. Qabsoo hadhaawaa keessatti hirmaannutu bilisummaa mi’aawaan nu gaha.
Ummatni Oromoo yeroo ammaa kana duula saaminsaa itti banameen lafa dhabsiifamaa fi qe’ee isaa irraa buqqaafamaa jira. Mootummaan Waayyaanee Master plan kaafame jechaa ture harka lafa jalaan hojii irra oolchuuf karoorfateera. Kanaaf gochaa diinaa Oromummaa balleessuu irratti xiyyeeffate kana hubbatnee gurmuu keenya caalaatti jabeeffatuun qabsoo finiinsuun dura haa dhaabbannu.
Harà ilmaan Oromoo kuma kudhanoota danuun lakkaa’aman mana hidhaa Wayyaanee beekamuu fi hin beekamne keessatti gidirfamaa, tumamaa, miidhaan qaamaa fi samuu irraan geessifamaa jira. Lammiilee mirga ifii fi ummata isaaniif dubbatuu fi falmuu irraa diinni irratti roorrisaa jiru kanneeniif ABOn kabajaa qabaaf. Karaa isaaf danda’ame hundaan kan bira dhaabbatu tahuu hubachiisaa, ummatni keenya biyya keessaa fi hawaasni Oromoo ala jiru marti obboleeyyan isaa haqaaf dhaabbatuu irraa giddirfamaa jiran kanneeniif dirmatnaa barbaachisu akka godhu hiree kanaan yaadachiisa.
Har’a ummatni keenya biyya isaa keessatti mirgaa fi nagaa dhabuu irraa gara biyyoota ollaatti baqataa akka jiru dhokataa miti. Baqa irrattis dheebuu fi beelaan kan gammoojjii keessatti dhuman, galaana qaxxaamuruu irratti kan lubbuu isaanii dhaban kumootaan lakkaa’amu. Kan milkaa’anii biyyoota ollaatti bahanis mootummaan Wayyaanee humna tikaa fi poolisaa biyyoota ollaa bitatuu fi sossobatuun biyyatti akka deebifaman taasisuun caalaatti miidhaa irraan gahaa akka jiru beekamaa dha. Mootummaan Wayyaanee kana hunda kan raawwataa turee fi jiru ummatni Oromoo mootummaa isaa jala hiriiruu diduu irraa ti. Umamtni keenya ABO fi Qeerroo bilisummaa daran jabeeffatuun mirga isaa qabsoo isaan harka galfatuuf socho’uu malee filmaata biraa akka hin qabne hubatamee sochiin kanaaf godhamuu dachaa dachaa akka tahuu ABO gadi jabeessee hubachiisaa. Ummatni keenya alaas sochii kana daran jabeessuuf kan duraanii caalatti waan qabu maraan akka waliin dhaabbatuu waamicha lammummaa dhiheessinaaf.
Mootummaa Wayyaane kan jiraataa jiru gargaarsa mootummoota gara garaa irraa argatuun malee deggersaa fi fedhii ummatootaan akka hin taane ifaa dha. Maddi galii fi jireenyaa kun akka gogu ykn qooru gochuun ammoo dirqama miseensotaa fi kan nagaa jaallattootaa ti. Kana hubachuun miseensotni dhaabaa biyyoota alaa adda addaa keessa jiraatan hundi madda galii diinaa kana qoorsuu irratti kan isaaniif danda’amu hunda akka hojjatan dhaama. Kana waliin rakkoo baqattummaa lammiilee mudataa jiruuf sababni rakkoo siyaasaa bittoota Itophiyaan uumame tahuu beeksisuu fi miidhaa gosa adda addaa baqataa Ormoo irra gahaa jiru dhageesisuu irratti akka hojjatan hubachiisa.
Dhuma irratti mootummaan Wayyaanee kan hanga har’aa jiraate deggersa maallaqaa fi tumsa diplomaasii mootummootaa irraa argatuun akka tahe ni beekama. Kanaaf ABOn ammas irra deebi’ee gargaarsi Wayyaaneef godhamu ummatoota ittiin cunqursuu fi ukkaamsuu irra kan oolfamu tahuu mootummootnii fi haawasni addunyaa hubatanii, gargaarsa godhaafii jiran akka dhaabanii fi mootummaa abbaa irree deggeruudhaan miidhaa ummatoota irra gahaa jiru bubbulchuuf tattaafatuu irra, furmaata waaraa argamsiisuu irratti akka bobba’an irra deebi’ee waamicha isaa dabarsaaf.